Markay Beel Walba Jaan Ka Taagan Tahay: Isku Soo Jiidashada Midba midka Kale Iyadoo Loo Marayo Aafada - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka
Markay Bulsho kastaa Dhul Ahaan Jirto: Midba Midba Midkisa Kala Soo Baxa oo Faafa
Bogga ugu weyn/updates/Markay Bulsho kastaa Dhul Ahaan Jirto: Midba Midba Midkisa Kala Soo Baxa oo Faafa
Wadajirka xagjirka ah ee loo maro Covid-19
Wacyigelinta bulshada ee loogu talagalay gargaarka iyo iskaashiga caafimaad ayaa ku abuuray meelo badan sida coronavirus-ka cusub (Covid-19) uu ku faafay.
Laga soo bilaabo qaarad ilaa qaarad, dadku waxay cusbooneysiiyeen oo ay maareyn jireen xakameynta macluumaadka, ku filnaanshaha dowladda iyo u diyaarsanaanta iyo sidoo kale bixinta gabaabsi xagga dhaqaalaha argagaxnimada oo suuqyada maaliyadeed ee adduunka ay hoos u dhacayaan.
Faafidda adduunka waa musiibo ku xirmaysa dhammaan isgoysyada halkaas oo ay musiibada cilladdu sida caadiga ah ku badato, duufaanta iyo go'doominta gobollada saameyn ku yeelata, laakiin markii kasta bulshada waa nooc ka duwan eber dhulka, ka soo qaadashada gudaha, sida ugu badan ee suuragalka ah, waxay noqotaa qayb muhiim ah.
Iyaga oo wadajira si taxadar leh u dhistay warbixin kusaabsan difaacida bulshooyinkayaga, dhisida buundooyinka marin u helida iyo farqiga xogaha ee dadka waawayni ee kaladuwanaanaya nuglaanta iyo wadaagida macluumaadka dhameystiran ee ku saabsan yareynta waxyeelada, dhismaha kheyraadka DIY iyo ka jawaab celinta ficillada ugu wanagsan ayaa ah wadajirka xagjirka ah ee ay ka dhashey dadka caanka ku ah aduunka oo dhan.
Tusmadan ka mid ah macluumaadkan ayaa dhisaya qaybkan, wax kasta oo ay ka mid tahay waxay qarinaysaa fikradda ah in gobolku inaga badbaadiyo waqtiga qalalaasaha.
Sida qoraalkan loo qorayo, sidoo kale waa xirmo lacageed oo loogu talo galay warshadaha kuwaas oo khasaarooyinkooda ay ku riixeen badbaadada bulshada galka gadaasha waqti aan wajahayno quwad liidata oo tijaabo ah, adeegyo caafimaad oo gabaabsi ah, kumanaan kun oo dad ah oo ku dhintay Covid-19 iyo in kabadan 120,000 oo kiis oo cudurka ah oo adduunka oo dhan ah.
Ha nixin. Abaabul.
Jawaab Coronavirus ah oo Sax ah
Sida duufaannada, dhulgariirrada, iyo dababka duurjoogta ah, masiiboyinku waxay sii fogeeyaan kooxaha taariikhiga ah ee la fogeeyay. Sida marxaladaha bilowga ah ee HIV / AIDS, dhaleeceynta iyo in la fogeeyo ayaa uga sii dareysa natiijooyinka caafimaadka dadweynaha. Jawaabta kaliya ee coronavirus waxay noogu yeereysaa inaan ka hadalno cirib tirka cunsuriyada ka soo hor jeeda Aasiya iyo naceybka, hubinta marin u helka daryeelka caafimaadka, biyo nadiif ah iyo nadaafad ahaan xuquuqul insaanka aasaasiga ah iyadoo aan loo eegin awooda bixinta, xaalada guri la'aanta, ama carqalada kale.
Marka madaxda (ama saboolnimada) ay dadka ku qasbaan inay shaqada la soo galaan, waxay muujineysaa baahida loo qabo isbadal aasaasi ah oo nidaamkayaga dhaqaale. Waqtigan xaadirka ah, helitaanka xanaanada cunugga waxay adkaan kartaa madaama iskuulku uu xirmayo si looga hortago faafitaanka COVID19 iyo bulshooyinka nugul ayaa ku adkaan kara helitaanka adeegyada haddii xirmooyinka cuntada, xafiisyada dowladda, iyo ururada bulshada la xiro. Sidee dhaqdhaqaaqayagu ugu gudbi karaa, iyada oo loo maro ficil toos ah, si loo buuxiyo baahiyaha? Hal jawaab ayaa ah qorista sheekooyinka. Isku duwaha Aasiyaanka Ameerika ee Aasiyaanku wuxuu leeyahay Samee wicitaan bulsho oo raadinaya akoonnada ugu horeeya ee midab-takoorka iyo nacaybka nacaybka ee ku xiran coronavirus.
Iyada oo fayraska si cad loogu gudbiyay cudurka faafa bulshada, maxkamadaha socdaalka ee dalka oo dhan waxay heleen a amar maamulka Trump si looga saaro dhammaan coronavirus info-boodhadhkooda darbiyada, iyadoo amarkii lagala noqday isla maalintaas. Boodhadhkani waxay soo gudbiyeen macluumaad muhiim ah oo ku saabsan aqoonsiga astaamaha iyo tallaabooyinka xakamaynta cudurka ee Ingiriisiga iyo Isbaanishka. Abaabul ka socda Hurricanes Irma ilaa Maria ilaa Matthew ilaa Dorian iyo wixii ka dambeeya, DHS iyo ICE, oo kaashanaya wadashaqeyn la leh jilayaal badan oo sharci fulin maxalli ah iyo gobolba leh ayaa si isa soo taraysa oo si isdaba joog ah u adeegsanaya daqiiqado musiibo ah oo ah shabaq loogu talagalay xaalad bulshada loogu hanjabay oo aan sharciyeysnayn. Hay'adahaani waxay sidoo kale sii wadeen inay ka shaqeeyaan soo saarista sheekooyinka ajaanibta muhaajiriinta ah si loo sharciyeeyo siyaasadaha xuduudaha wadaniyiinta, militariga.
In kastoo kuwa kale ay isku dayi karaan inay naftooda ku qanciyaan fikradda ah in COVID-19 kaliya ay si ba'an u saameyn doonto dadka aan is-difaaci karin, kuwa naafada ah, ama waayeelka ah, ama leh xaalado horay u jiray, waxaan diidnay laynkaan awood-u-sheegashada ah. Dadkaasi waa annaga iyo kuwa aan jecel nahay. Waxaa jira halheys caan ah oo loo adeegsaday cadaaladda naafada iyo wareegyada wax ka qabashada musiibada ee ku saleysan midnimada - “Waxba nagama jiraan, annaga la'aanteed.” Hadaadan wali Akhri dhaleeceyntaan aadka u wanaagsan ee khudbadda guud ee COVID-19 kasoo jeeda aragtida cadaalada naafada. Oo hubi Tilmaanta Bukaanka Bukaanka Cudurka daba-dheer ee Coronavirus.
Naafanimada jidhka ka sokow, go'doomin bulsheed oo daba dheeraata ayaa sidoo kale saameyn xun ku yeelan doonta dadka qaba nuglaanta caafimaadka dhimirka. Hubinta, kaalmada koowaad ee shucuurta, iyo taageerada asxaabta, xitaa haddii meel fog laga qabto, ayaa ka muhiimsan sidii hore.
Waqtiyadan waxaan sidoo kale waa inaan xasuusano saaxiibbadeen xiran iyo kuwa aan jecel nahay. Maxaabiista ayaa lagu qasbay hadda inay shaqeeyaan wax yar oo mushahar ah si loo sameeyo maaskaro iyo gacmo nadiifiye. Isla mar ahaantaana, xabsiyada, xabsiyada, xarumaha dadka lagu hayo, iyo kuwa cuuryaamiinta ahba waxay horeyba u yihiin cudurro iyo dayacaad baahsan oo xagga caafimaadka ah, waana mas'uuliyaddayada inaan u doodno dadka xiran, kuwaas oo si aan caadi ahayn u xanuunsan oo aan heli karin daryeel caafimaad oo habboon ama nadaafad darro. waxyaabaha. Fadlan taageer telefoonkan coronavirus ayaa zap asxaabtayada ku jira Xabsiyada Sunta sunta. Taariikh dheeri ah oo ku saabsan dhaxalka xadgudubka, dhiig-miirashada, iyo khatarta maxaabiista ee musiibada, riix halkan.
Waanu saxeexnay dalabyadan ayaa laga soo qaaday qabanqaabiyeyaasha aasaasiga ah ee khuseeya COVID-19, oo soojeedin kooxdaada ama kooxdaadu sidoo kale inay sameeyaan. Fikrad uun, halkan waxaa ah dhowr lamaane oo na soo istaagay:
Waxaan ka dalbaneynaa baaritaan bilaash ah qof kasta oo u sheego takhtar caafimaad in la baarayo. Tijaabooyin ayaa Maraykanka ka yaraaday. Waxaan u aragnaa mid aan cudur daar lahayn, marka la eego in dalal kale ay ku guuleysteen abaabulidda imtixaan ballaaran. Ku guuldaraysiga dowladda ee bixinta iyo maareynta baaritaannada waxay ka dhigan tahay in, xilligan la joogo, wax fikir ah kama lihin tirada kiisaska dhabta ah ee ka jira Mareykanka ama ilaa intee la'eg cudurku ku fidayo. Dhakhaatiirta aagagga ay dhibaatadu saameysey waxay ka cawdeen inaysan laheyn baaritaanno ay ku maamulaan ama saraakiisha caafimaadku aysan u oggolaan inay iyagu maamulaan baaritaannada COVID-19. Tani waa musiibo weyn oo ku timid dhinaca maamulka Trump waana in si dhaqso ah wax looga qabto. Waxaan u baahanahay baaritaanno la isku halleyn karo oo si fudud loogu heli karo rugaha caafimaad oo lagu maareeyo lacag la'aan.
Waxaan ka codsaneynaa daryeel bilaash ah kuwa tijaabinaya si loo hubiyo in kuwa aan caymiska laheyn ay helaan daryeel ayna ka qeyb qaataan tillaabooyin gacan ka geysanaya yareynta fiditaanka viruska.
Waxaan u baahannahay qorsheyaal caawimaad maaliyadeed iyo mid maadi ah oo loogu talagalay dadka laga filayo inay ka joogsadaan shaqada. Maahan wax macquul ah in dadka loo sheego inaadan ka tagin guryahooda haddii ay ku guuldaraystaan ​​tan waxay la macno tahay inay guryahooda lumi doonaan ama aan haysan doonin cunno iyo dawo la'aan. Weelka waa in la fududeeyo.
Waxaan ka dalbaneynaa masaafurinta ICE masaafurinta si loo hubiyo in dadka aan sharciga lahayn laga niyad jabin inay raadiyaan daaweyn ama baaritaan.
Waxaan dalbanaa qorshe nabadgelyo oo wax ka qabta baahiyaha dadka naafada ah ee ku nool Mareykanka oo laga yaabo inuu cudurku saameeyo. Dadka naafada ah inta badan waa laga tagaa xilliyada dhibaatooyinka. Waxaan u aragnaa natiijadaasi mid aan la aqbali karin. Dadka naafada ah waa inay sidoo kale yeeshaan cod ay ku go'aaminayaan tallaabooyinka la qaadi doono si loo hubiyo jiritaankooda.
Xukuumadda federaalku waa in ay xurmeysaa waajibaadka sharciyeed ee ay u leedahay Dadka Dhaladka ah iyada oo la siinayo shaqaale caafimaad oo lama huraan ah si ay ula dagaallamaan dhibaatadan. Dadka asaliga ah ayaa si xun u silcay muddadii masiiboyinkii hore sababta oo ah waxaa ula dhaqmay masuuliyiin ka tirsan dawladda iyo dadweynaha guud ahaanba. Waa inaanan u oggolaan inay taariikhyahannadaasi dib u soo celiyaan.
Riix halkan liiska buuxa ee shuruudaha.
CVEID-19 Mutual Aid
Iyada oo ay jiraan baahiyaha ugu badan ee aasaasiga ah dadku waxay u baahan yihiin inay caafimaad qabaan (iyo xaaladaha qaarkood, nool) ha ahaato mid gaaban, mid aan ku filneyn ama gebi ahaanba ka maqan, iyo sidoo kale daad daadad, jahwareer iyo macluumaad qallafsan oo ka imanaya kuwa awooda haya, kuwa u taagan saameynta ugu badan ayaa looga tagay inay ka baxaan buur macquul ah oo CDC iyo dowlad-goboleed. tilmaamo la geeyay kuwaas oo aan loo wada dhanneyn oo aan dad badani adeegsan karin.
Loogu talagalay dadka isticmaala maandooriyaha inta lagu jiro cudurkan faafa, macluumaad dhameystiran oo ku saabsan yaraynta waxyeellada ayaa si cad uga maqnaa wadahadalka caalamiga ah ee caafimaadka bulshada. Isbahaysiga Yaraynta Dhibaatooyinka Virginia ayaa soo saaray tan ugu fiican xaashida macluumaadka si loo buuxiyo nusqaamahaan dhiman ee dhiman kara.
Crimethinc ayaa yiri goor dhaweyd, "Halkii aan ka halganaan lahayn maareynta cawaaqib xumada sii kordhaysa ee nidaamkan bulsheed si shaqsi ahaaneed, aan isugu nimaadno inaan ka hor tagno sharuudahayada. Wadajir ahaan, waan iska caabin karnaa oo aan u noolaan karnaa. ” Waxbadan kuma heshiin karin. Dadka ka socda adduunka oo dhan ma sugi doonaan dowladda ama mas'uuliyiinta kale, laakiin waxay beddelkeeda ogaadaan dariiqooyin ay isku daryeeli karaan markii dhibaatada coronavirus ay sii weynaaneyso. Halkan waa a Liiska dadka isdifaacaya ee codsanaya caawimaad iyo a kheyraadka sii kordhaya ee dadka waaweyni ee saxeexay si ay uga jawaabaan baahiyaha dadka.
From Washington ilaa Washington, DC, ka Grand Rapids iyo Dooxada Huron ilaa Chicago, ka Tacoma ilaa Philadelphia, ka Minnesota ilaa Massachusetts, ka Oakland ilaa New York City - dadku waxay abaabulayaan dadaallada # covid19mutualaid. Ardayda iyo shaqaalaha daryeelka caruurta waxay abaabulayaan dadaallada gargaarka wadaagga ah. Shaqaalaha kuwaas oo noloshooda ay saameyneyso fayraska 'coronavirus' ay abuureyso wadiiqooyin is caawiya. Dadaalladan dhiirrigelinta ah, ee lama filaanka ah, ee iskiis u taagan ayaa ah cirifka ugu dambeeya. Waxay ku socotaa waxay leedahay xitaa intaa ka sii badan Liis dhameystiran oo sii koraya ee dadaalada wada-jirka ee coronavirus halkan.
Sida loo hago sida loo dejiyo waxqabadyo kuwan la mid ah oo ka dhex jira bulshadaada, riix halkan, halkan, Iyo halkan. Markaa dadka waaweyni ha ogaadaan wax ku saabsan dadaalkaaga wada-shaqeynta ee coronavirus halkan, halkan, oo leh hashtag # covid19mutualaid ama emayl u dir mashruucaaga gargaarka ee: [emailka waa la ilaaliyay]
Mawaxaad raadineysaa taageero asaageed? Halkaan waxaa ah boos u heellan dadka naafada ah iyo / ama is-tallaalaya si ay ugala hadlaan diyaarinta iyo taageerada. Kooxo kale oo COVID-19 ah ayaa soo galay internetka Jawaabta Coronavirus Dadka.
Waxaa jira tiro ka mid ah xarumaha hubinta tooska ah ee internetka. Kilinikada Bilaashka ah ee Herbalista waxay leedahay a Tilmaanta Daryeelka Bulshada (Covid-19 Community Guide). Kheyraadka kale ee coronavirus waa weyn, dhameystiran, iyo weligiisba soo baxa oo ay ka mid yihiin COVID-19 Kaabayaasha Labada Dhinac iyo Kheyraadka U doodista iyo Qalabka Kheyraadka Coronavirus. Ma doorbideysaa inaad ka hesho macluumaad adoo adeegsanaya baalashyada? Baadhid Coronavirus: Xigmad ka timid Lens Justice Social Lens iyo Waxa la sameeyo Marka Dunida dabku kaco.
Dhamaan fursadaha kor ku xusan si toos ah iyo si toos ah wax looga qabto baahiyaha dadka, waxaan ku dhiirigelinaa dadka fursad u hella inay maalgashadaan si ay u taageeraan saameynta dadka si toos ah u saameeya haddii ay awoodaan. Haddii aadan awoodin sabab kasta ha noqotee, ama aad rabto inaad naga caawiso iibsiga sahaydii loo baahnaa oo badan, tixgeli si aad u taageerto sanduuqa jawaab-celinta Musiibada Musiibada ee Coronavirus.
Astaamaha, Jirro iyo Aaminaada
Astaamuhu waxay u dhexeeyaan astaamo qabow oo fudud; qufac iyo qandho neefta oo ku qabata iyadoo sii xumeynaysa oo keenta oof-wareenka iyada oo xitaa dhibaatooyinka ka sii daran ee kooxaha halista ugu jira. Boqolleyda dadka u dhinta COVID-19 waxay dul wareegayaan 2% dhammaan kiisaska. Cudurku wuxuu sarreeyaa usbuucyada ugu horreeya markii uu fayrasku ku faafo bulshada, maadaama dadku aysan heli karin daaweyn isla markaana dhakhaatiirtu aysan aqoon u lahayn halista. Macluumaadka kartida, iyo helitaanka daaweynta hore waxay si weyn hoos u dhigeysaa heerka cudurada xitaa koox kasta.
SIDEE AYUU UGU BADAN YAHAY: Waqtigaan la joogo, COVID-19 waxaa la rumeysan yahay inuu ku faafo dhibic (qufac, taabasho dareeraha jirka ee qof qaba fayraska), laakiin baaritaanada qaar ayaa muujinaya inay dhici karto inay hawadu ka jirto. Fayrasku wuxuu ku noolaan karaa dusha sare muddo gaaban.
YAA UGU HALIS KHATARTA: Dadka ka weyn 60 jir, dadka qaba dhibaatooyinka neefsashada ama dhibaatooyinka wadnaha, iyo dadka nidaamka isdifaaca.
DAAWEYN: Waqtigaan la joogo ma jiraan wax daawo ah ama tallaallo ciribtira fayraska. Istaraatiijiyadda hadda jirta ee ay adeegsadaan bixiyeyaasha daryeelka caafimaadku waa in la yareeyo astaamaha ugu daran halka nidaamka difaaca bukaanka uu la dagaallamo fayraska. Dadka si buuxda u bogsada waxay caadi ahaan iska difaacaan culeyskaas gaarka ah ee COVID-19, laakiin waxaa suurtagal ah in qandaraasyo ku dhaco isbeddelada kale ee coronavirus.
GOORMA LA Raadinayo DARYEEL CAAFIMAAD: Qiyaasaha ayaa ah in 80% kiisaska ay soo kaban doonaan iyagoon u baahnayn isbitaal dhigid. Aqlabiyadda tirada badan waxay ka jawaabi doonaan nasashada, cabitaanka cabitaanno fara badan, daaweynta dhirta si loo xoojiyo nidaamka difaaca jirka (haddii aan kor loo qaadin difaaca jirka oo aan laga hor imaanaynin cudur horey u jirey oo isdifaaca jirka ama haddii aad qaadaneyso difaaca jirka), iyo tylenol / motrin. Laakiin haddii adiga ama qof aad daryeesho ay neeftaadu ku yaraato neefsashadu ama aad la kulanto caajis daran, markaa waa inaad tixgelisaa inaad raadsato daaweyn caafimaad. Wac dhakhtar ama isbitaal, haddii shaki kaaga jiro.
Faahfaahin dheeri ah iyo cilmi baaris
Halkan waxaa ah isku xiraha Xarunta Macluumaadka ee Nolos Coronavirus ee Elsevier. Halkaan waxaad kaheli doontaa khabiir, macluumaad xeel dheer oo loogu talagalay cilmi baarista iyo bulshada caafimaadka ee Novel Coronavirus (sidoo kale loo yaqaan COVID-19 iyo cinwaankeeda ku meel gaarka ah ee 2019-nCoV). Dhammaan ilaha waxay xor u yihiin helitaan waxaana ku jira tilmaamaha rugaha caafimaadka iyo bukaannada. Qeybta 'Cilmi baarista' waxaad kaheli doontaa marxaladii ugu dambeysay ee hore iyo cilmi baaris asaag ah oo laga sameeyay joornaalada ay ka mid yihiin The Lancet iyo Cell Press, iyo sidoo kale xiriiriye Xarunta Coronavirus dhanka ScienceDirect, halkaas oo aad kaheli doonto maqaal kasto oo quseeya Coronavirus, SARS, iyo MERS oo si xor ah looga heli karo. Qeybta hoose ee macluumaadka bukaan-eegtada waxaad kaheli doontaa ilo kalkaaliyaal caafimaad, kiliinigyo iyo bukaannad, oo ay kujiraan Waxyaabaha isweydiin leh oo ku saabsan astaamaha iyo a Shabakadda CDC webinar waxa ay dhakhaatiirtu u baahan yihiin inay ogaadaan si ay ugu diyaar garoobaan COVID-19 gudaha Mareykanka. Halkan waxaa ah isku xiraha CDC Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Soo Koobida Xaalada - si joogto ah loo cusbooneysiiyaa CDC. Fallaadha qalooca waa il kale oo weyn oo dhameystiran. Si aad ula socoto kiisaska COVID-19, halkan waxaa ku yaal khariidadda Live ee Johns Hopkins Live iyo NCoV2019. Dashboardka Noolaha.
Caawinaad iskujira waa Mustaqbalka
Dheecaanka iyo kala shaandheynta macluumaadka sida ay u soo baxayaan ayaa muhiim u ah inta lagu jiro xiisaddan. Shaqada baahinta ee dib-u-eegista xogta, dhismaha ilaha, ka shaqeynta in si aad ah loo xaddido halista gudbinta, iyadoo la siinayo taageero kuwa is karantiimaynaya iyo kuwa u nuglaantoodu u gelisay khatar sare iyo saameyn aan dheellitirnayn oo ka timaadda Covid-19 iyo sidoo kale abaabulka dadaallada wadaagga gacan ka geysato is-aa-gaadhista iyo badbaadada bulshooyinkeenna adduunka oo dhan ayaa sii socda.
Kuwo badan oo xilalka awoodda haya ayaa si isdaba joog ah u qabta shaqada sharraxaadda jagooyinkooda iyo jawaabta gobolka ee dhibaatadan. Saaxada siyaasada iyo dhaqanka waxaa hareeyay daawadayaasha ajnabi nacayb, cunsuriyad, iyo karti. Ka mid noqoshada macluumaadka caafimaadka bulshada, si tartiib tartiib ah ugu sii kordhaya khadka tooska ah waa ka hortag waxayna muhiim u tahay amniga bulshadayada iyo caafimaadka bulshada. In kasta oo dadka ku jira meelaha ugu sarreeya dowladda ay hoos u dhigeen dhibaatada isla markaana iska indhatireen baahiyaha dadka, haddana waxaa jira xaaladdan oo ay ka soo ifbaxeen saxiixyo khadka tooska ah ee bulshada si ay u gaarsiiyaan sahayda dadka aan tallaalka qaadin, heerka waddooyinka oo laga abaabulo xaafadaha adduunka oo dhan. bixinta taageero caafimaad, cunno iyo biyo u qeybin deriska la nuglaanta kala duwan, kheyraadka iyo xog uruurinta iyo kala shaandheynta heerarka tirada badan ee macluumaadka soo galaya maalinba maalinta ka dambeysa si gacan looga geysto taageerida caafimaadka bulshadayada maadaama aan wajaheyno dariiqooyinka cusub ee layaabka leh ee aafada aduunku waxay carqaladeyn kartaa nidaamka waxayna ka tagi kartaa masiibo hanjabaad iyo saameyn ku yeelata bulshada si aan nafteenna iyo midkeenba midka kale u daryeelno.
Shabakadaha kaalmada isweydaarsiga ayaa la sameeyay oo koray si ay nooga dhigaan kuwo nabdoon oo aan daryeelo waqtiyada khatarta ah.
Wadajirka xagjirka ah ee geeskasta oo dunida ah wuxuu sii wadaa jawaab celin naxariis leh oo lagu wargaliyay Covid-19 si loo dhiso marin u hel iyo ilaha dadka oo dhan meel walba.
#mutualaid #WeKeepUsSafe # covid19mutualaid
2020-03-15T23:21:33-04:00March 13th, 2020|updates|